Gamsei Jongwe Barha - Dhizaini magazini
Jongwe Barha Pakakavhurwa Gamsei muna 2013, hyper-localism yakaunzwa kumunda wekudzidzira uyo wanga uchingova unogarowo nezvekudya. KuGamsei, zvinjo zvetavaira zvinogona kunge zvakamanikidzwa kana kurimwa nevarimi venzvimbo. Iyo bar yemukati, iko kuenderera pachena kweiyo uzivi. Sezvakangoita majogo, Buero Wagner akatenga zvese zvigadzirwa munharaunda, uye akashanda pamwe pakabatana nevagadziri vemunharaunda kuti vagadzire zvigadzirwa-zvakagadzirwa mhinduro. Gamsei ipfungwa yakasanganiswa yakazara inoshandura chiitiko chekunwa jongwe ichiita chiitiko chechiitiko.
Zita rechirongwa : Gamsei, Vagadziri zita : BUERO WAGNER, Izita remutengi : Trink Tank.
Jongwe Barha BUERO WAGNER Gamsei